NamasteNEPALI.com: स्मार्टफोनमा के के गर्न हुँदैन ? जानी राखौं है !
स्मार्टफोनमा के के गर्न हुँदैन ? जानी राखौं है !
स्मार्टफोनले प्रयोगकर्ताको जीवन सहज बनाएको छ। तर प्रयोग गर्न गल्ती गर्दा स्मार्टफोनको जीवन भने असहज बन्न सक्छ। यस्ता केही गल्तीहरु गरिन्छन् जसले स्मार्टफोनलाई नोक्सान पुर्याउन सक्छ। पढ्नुस् स्मार्टफोनसंग के के गर्न हुँदैन।
गल्ती नम्बर १: युएसबीले फोन चार्ज गर्नु
स्मार्टफोन किन्दा ब्याट्री चार्जरसंगै युएसबी केबल पनि पाइन्छ। डाटा ट्रान्सफर गर्न प्रयोग हुने यो केबलले स्मार्टफोन चार्ज पनि गर्ने गरिन्छ। तर तपाइले याद गर्नु भएको छ होला, यसरी चार्ज गर्दा स्मार्टफोनको ब्याट्री लाइफमा नोक्सानी पुर्याउँदछ।
गल्ती नम्बर २: फोनले अन्तरंग तस्बिर खिच्नु अनि सेभ गरेर राख्नु
फोटो खिच्न कसलाई मन नपर्ला र? तर फोनमा आफ्ना गोप्य अनि अन्तरंग तस्बिर खिचेर राख्दा समस्यामा पर्न सकिन्छ।
गल्ती नम्बर ३: समयमा फोन अपडेट नगर्नु
एन्ड्रोइड तथा आइफोनको हरेक नयाँ भर्जन पछिल्लो भन्दा सुरक्षित अनि देखिएका समस्या हटाइ बनाइएको हुन्छ। समयमा फोनको अपरेटिङ सिस्टम अपडेट नगर्दा नयाँ फिचरहरु प्रयोग गर्न पाइदैन।
गल्ती नम्बर ४: खतरनाक एप्स डाउनलोड गर्नु
यदि स्मार्टफोनमा अथेन्टिङ एप्स डाउनलोड गरिएन भने मालवेयर को साथ साथ मेमोरीमा पनि असर गर्दछ। तीन वा त्यो भन्दा माथीका रेटिङ भएको एप मात्र डाउनलोड गर्नु सुरक्षित हुन्छ।
गल्ती नम्बर ५: फोनको ब्याकअप नराख्नु
ब्याकअप नराख्दा फोन चोरी वा बिग्रयो भने महत्वपूर्ण डाटा नष्ट हुने डर रहन्छ। फोन केही गरि बिग्रिहालेमा ब्याकअप डाटा काम आउन सक्छ।
गल्ती नम्बर ६: फोन तात्दा वास्ता नगर्नु
फोन ओभरहिट भइरहँदा बिस्तारै बिस्तारै फोनको कार्यक्षमतामा असर पुग्छ। ब्याट्री लाइफ घट्न थाल्छ। फोन चार्ज गर्ने समय नेट बन्द गर्दा फोनको सर्किटमा ओभरहिटको असर कम पर्छ।
गल्ती नम्बर ७: स्क्रिन प्रोटेक्टरको प्रयोग नगर्नु
फोनको स्क्रिनलाई कोरिनबाट जोगाउन स्क्रिन प्रोटेक्टर प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। यसले निकै हदसम्म फोनको स्क्रिन ड्यामेज हुनबाट बचाउँछ।
गल्ती नम्बर ८: फोनको सबै डाटा अनलाइन स्टोर गर्नु
आफ्नो फोनको सबै डाटा अनलाइन स्टोन गर्नु खतरनाक सावित हुनसक्छ। सर्भिस प्रोभाइडर, साइट क्र्यास वा बन्द हुँदा डाटा गायब हुन सक्छ, त्यसैले भर पर्न सकिन्न। त्यस्तै ह्याक भइ महत्वपूर्ण डाटा लीक हुने खतरा पनि त्यति नै हुन्छ।
गल्ती नम्बर ९: फोनमा लक नराख्नु
फोनमा सेक्युरिटी लक नराख्दा सबैभन्दा ठूलो खतरा फोटो चोरी हुने हुन्छ। साथै बैंक सम्बन्धि जानकारी, कन्ट्याक्ट डिलेट पनि चोरिन सक्छ। फोन केही गरि हराइहाले पनि सेक्युरिटी लक हुँदा डाटा चोरीने सम्भावना न्युन हुन्छ।
Labels: INFO, USEFUL